I-Moonshine - yaziwa isikhathi eside - isiphuzo sinomnandi futhi sinobuhle. Ngaphakathi kwemingcele, emikhosini, uthuthukisa isimo sakhe sengqondo futhi unikeza injabulo. Ngoba abaningi abagijimeli esitolo ukuze bajabule ngokweqile, kepha bakhetha ukusebenzisa i-home-made device ye-cooker induction bese upheka lesi siphuzo ngokwakho.
Ngaphambi kokushaya njalo kukhona okukhethwa kukho: ukusebenzisa imishini eyenziwe ngokwayo noma ithengwe. Indlela elula ukuthenga idivaysi eyenziwe ekhaya ye-cooker induction, njengoba isipiliyoni sabaningi siye sabonisa ukuthi kuyisidingo esihle kakhulu sokulungiselela imimoya yekhwalithi ngezindleko eziphansi zezimali.
Ukuba nomshini wokukhiqiza i-moonshine, okuyinto yokwakhiwa kwe-cubic distillation, i-cellar eyomile ne-hose, kungenzeka ngemizuzu engu-60 ukuthola 1.5 amalitha okuphuza utshwala obuhle kakhulu. Le nqubo yenziwa ngokuzimela - ngokucwilisa iziqhwaga. Izinzuzo zomshini wekhaya-wokuphuza inkokhelo ezingenakuphikwa.
Izimfanelo zayo ezinhle zihlanganisa:
Izinto ezivela lapho idivaysi eyenziwa ngokuvamile ivame ukudla okungenasici;
Ukusebenza okuhle kakhulu;
Ukuqina okunokwethenjelwa, ngoba hhayi iphunga elimnandi alithandanga egumbini;
Ukuphepha ngesikhathi sokusebenza;
Izinga eliphakeme lokuhlanzwa ekungcoleni ubuthi.
Ungakhetha kanjani i-moon?
Kunezimfihlo ezincane okudingeka wazi uma umbuzo uvela, ukuthi ungakhetha kanjani umninikhaya kumpheki wokungeniswa. Kunezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zazo, kodwa akuzona zonke ezifanele lolu hlobo lwamacwecwe. Ngakho-ke, ama-nuances amaningi athatha indima, futhi uma ulandela imiyalo, impilo yokusebenza iyoba yinde kakhulu.
Kufanele wazi ukuthi kunezinhlobo ezahlukene zokupholisa emkhathini. Uma lokhu kuyindlela eqhubekayo yokupholisa, i-unit ingasetshenziswa kuphela lapho ingaxhunyiwe kumbhobho wamanzi noma amanzi asebenzayo.
Umthamo wedivayisi udlala indima. Kuxhomeke kule nkinga, kungakanani ukuphuza utshwala obutholakala. Kunomthetho - hhayi ukugcwalisa i-cubic distillation ngaphezu kwe-¾ yevolumu. Ukuhaha kuleli cala kungaholela ekutheni ukwehla kwamanzi noma i-foam kungene esitokisini esomile noma esiqandisini, futhi lokhu kuzokwenza kube nzima kakhulu inqubo yokuphuza izidakamizwa.
I-dry-mash, noma i-reflux condenser, kungenzeka ukuthi ayikho kwezinye izinhlelo zokusebenza, kodwa ngenxa yale divayisi izinga lephuzo elidakayo liyathuthuka kakhulu. Futhi okubaluleke kakhulu, uketshezi luhlanza ukungcola okulimazayo ngesikhathi sokuphuza izidakamizwa.
Kufanelekile ukunaka entanyeni: ngokubanzi, kulula ukuthi uthele zonke izithako, bese uhlanza ngemuva kokuphela kwenqubo.
Ukuze igumbi lihlale lifudumele, i-cube ye-distillation ayikho isidingo sokuthi ihlale iphelele, kodwa iminyene kakhulu, uma i-induction cooker isetshenziselwa izixhobo zokuphuza. Insimbi kumele imelane namazinga okushisa aphezulu futhi ingabi nakhubazeka. Akuwona wonke amadivayisi akhiwe ekhaya afana nalezi zimfanelo, ngakho-ke ungamelani nomthwalo owengeziwe.
Ingabe umpheki we-induction uyakulungela ukuphuza i-moonshine?
Muva nje, ipuleti lokungeniswa ayikho isidingo esingaphansi kwepuleti yegesi, isebenza kumatsheni kagesi futhi iphephile kakhulu ukusebenzisa. Isimiso sokusebenza kwayo ukuthi sinomkhoyili owakhiwe ngaphakathi. I-amanje idlula kuwo, futhi isitsha esiphezulu sishisiwe. Kodwa akuzona zonke izitsha ezingasetshenziswa ekusetshenzisweni kwayo. Futhi, noma kunjalo, i-hob hoductionh ye-moon ihamba kahle. Uma sicabangela ukusebenza kahle, ngakho-ke kunama-90% kulabapheki bezinhlanzi. Egesi kuba inkomba kuphela yamaphesenti angu-50 kuphela.
Abakhiqizi bakwazi ukufeza izinqubo ezintsha manje ezibekwe amacwecwe okuqamba ukuze zibone ububanzi bezitsha, ngenxa yalokho, ukulinganisa okuzenzakalelayo kwendawo yokushisa. Kukhona nezinhlelo ezakhelwe ngaphakathi, okuvumela ukuthi ukhethe ukushisa okudingekayo, kanye nesikhathi esifanele.
Uma ama-splashes awela phezulu kwepuleti, ehlala efana nesikhumba ngisho nangesikhathi sokusebenza, iphunga elivela kwimikhiqizo yokushiswa ngeke lizwe.
Ama-slabs anjalo asindisa amandla nokushisa. Ukuze ulawule inqubo kulula ukusebenzisa ukushisa okufakelwe ngaphakathi ukuvimbela ukupheka.
I-single-plate induction cooker
Ukukhetha i-moonshiner ye-cooker induction, phansi kwayo ingaba nezinkinga ezincane - ngezintambo noma ama-bulges. Ukuthintana nomswakama wokushisa kuzobe kunomkhawulo, umbuso wokushisa uzolungiswa ngokuzenzakalelayo. Ubuningi bezitho zomzimba zidlala indima, kodwa insimbi ngokwayo idlala indima enkulu. I-cooker induction ayikwazi ukushisa iziqukathi ze-aluminium. Futhi uphonsa imikhiqizo yensimbi ngoba izokwenza, njengoba ukubunjwa kuqukethe insimbi. Kodwa i-cubic distillation yensimbi yensimbi i-rarity.
I-elula kunazo zonke yokusebenzisa i-cook-induction-cooker yedivaysi ekhishwe ekhaya, ingafakwa ifanki elikhulu. Kodwa uma ububanzi bebhola lokushisa kweplate lidlula ububanzi be-cube yezidakamizwa, ukushisa kuyoba ngokushesha futhi kunamandla kakhulu. Lapho ama-diameter ehambisana, imisebe yamagnetic ivaliwe.
Idivaysi ekhishiwe ekhaya yokupheka induction yokuklama okunjalo, ene-degree of protection, ne-valve yokuphepha ne-thermometer, isetshenziswe ekhaya. Futhi umpheki ngokwayo uhlonywe ngendlela yokuthi uma uphuzo oluphuza utshwala, khona-ke ukushisa ngeke kwenzeke. Nakuba lolu hlobo lweplate lubhekwa luphephile, akukafaneleki ngenkathi kuthinta ubuso ngezandla zalo: ukufakwa kwamanje, nakuba kubhekwa njengobuthakathaka, kungalimaza umuntu.
Yikuphi ipuleti yokufakelwa okungcono kakhulu kwelanga, umthengi unentshisekelo kokuqala.
I-Apparatus "Japan" ibhekwe njengendawo yonke, ngoba yenza kube lula ukulungisa izinga eliphezulu elikhishwe ekhaya, kodwa futhi ukugcoba nobhiya obumnandi.
Unomshini wesibili esiqandisini, umshini wesiphephelo, umlomo omkhulu. Ingaphansi kweyunithi imele indawo engama-4 mm eyenziwe ngensimbi. Ikhiqizwa ngosizo lwe "Japan" kuze kufike ku-28 amalitha amanzi.
Idivaysi ibiza kakhulu, kodwa ukubuya ekusebenzeni kwayo kuyona eningi kakhulu. Unezingxenye eziningi, futhi idivayisi ekhethekile ikuvumela ukuthi ungaxhuma emthonjeni wamanzi.
"Magarych 12 l premium" - imishini eyaziwa kakhulu ekhaya eyenzelwe abapheki be-induction. Impendulo yabathengi ibonisa ukuthi iyasiza ekukhiqizeni i-whiskey ne-cognac, nezinye iziphuzo ezidakayo ezinomsoco. Yenziwe ngensimbi engagqwali engaphansi kwe-3 mm. Ikhwalithi yedivayisi iphezulu, evumela ukuthi isebenze isikhathi eside kakhulu. Ngemuva komsebenzi i-disassembled and cleaned kalula.
Ukuzibandakanya ekwakhiweni kwe-moon, ukuba nompheki we-inducti kokubili kulungile, futhi kunenzuzo, futhi ngokwezimali ngokuphelele akuyona imali. Futhi okubaluleke kakhulu, izivakashi ziyohlale zikhona isiphuzo esihlanzekile futhi esihlwabusayo.
Amabhodlela Avent: baby fed - umama ojabulayo!
Khetha izitayela zethebula
Liquid yegwayi e-electronic Vardex: ukubunjwa ngalunye kuyingqayizivele ngempela
Umpheki wegesi "Darina": ukubuyekezwa nemiyalelo yokusetshenziswa
Umuthi 'Spazmomen ": imiyalelo amaphilisi ukusetshenziswa, ukubuyekezwa, izincazelo, analogs